Ikhonkco lokudibanisa eliqhelekileyo loMvelisi woluhlu lwe-ANSI, uMthengisi, umzi mveliso
Ukuqhagamshela iwebhusayithi unxibelelwano-Cinezela iFit (BS / DIN / ANSI)
Ikhonkco eliqhagamshelekayo elisemgangathweni lwee-ANSI zothotho olunokufunyanwa, lusetyenziswe nakwimixokelelwane ejijekileyo indawo enesantya okanye iimeko ezinzima zihlangatyezwa. Ukubonelelwa ngezikhonkwane ezibini ezidityanisiweyo ezityikitywe kwipleyiti engaphandle, enye ipleyiti yangaphandle ngoku ilicofa elifanele izikhonkwane kwaye ikhuselwe zizikhonkwane ezahluliweyo emva kwendibano. Umdlalo wokushicilela amakhonkco oqhagamshela anokuqeshwa kuphela xa; ii-hyperlink ezintsha ziya kuhlala zisetyenziselwa ukubuyisela amakhonkco aqhekekileyo.
Ngaphandle kwamatyathanga akhethekileyo naphina apho ikhonkco elixineneyo ngokuqinisekileyo liyindlela eyimfuneko kunye noyilo, amakhonkco axineneyo asetyenziselwa kuphela apho ubude betyathanga bufanele ukuba ludidi lweepaki. Lo mkhuba ayicetywanga; Zonke iidrayivu kufuneka ngenene, naphi na apho zinokufikeleleka, zakhiwe ngolungelelwaniso olwaneleyo ngokubanzi ukuze kuqinisekiswe ukusebenzisa inani lee-pitches kuyo yonke ikhonkco. Tend to USE UKUSETYENZISWA KWEZINXIBELELWANO EZIKHULULEKILEYO KWISIPHUMO, KULANDELWE KAKHULU OKANYE KUKHULU UKUQHUBA ISantya.
I-Cranked Hyperlink-iSlip Fit (BS / DIN) yokuLungisa i-Hyperlink-iSlip Match (ANSI)
Ikhonkco elinye lewebhusayithi elinamacwecwe amaqhosha acinezelwe kwityholo kunye ne-roller yokuhlangana kwisiphelo esincinci. Iphini yokudibanisa ilungele indawo (engu-128) ifakwe kwisiphelo esibanzi kwaye ikhuselwe yipini yokwahlulahlula.
I-Cranked Hyperlink Double (BS / DIN) I-Pitch Offset Hyperlink (ANSI)
I-backlinks ezi-cranked cranked zifumaneka kubukhulu obukhulu kunye neendidi zetyathanga. Iyunithi iqulethe i-hyperlink yangaphakathi (No. 4), enezinto ezinqamlezileyo ezinqamlezileyo ezigcinwe endaweni efanelekileyo yipini ebanjiweyo. Isikere esisebenzayo sokuqhekeka kwesixokelelwano ngokunyanzela isiphelo sithambe izikhonkwane zokuthwala eziphuma kwiipleyiti zangaphandle. Kwabanye abavelisi betyathanga, i-rivet swell kufuneka iqale ibe ngumhlaba.